I-Casa Nomadica, i-Luxury casita ethe cwaka kufuphi nolwandle - I-Airbnb
I-Casa Nomadica, i-Luxury casita ethe cwaka kufuphi nolwandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKelsey
I-Luxury one bedroom casita embindini we-Ayampe ethe cwaka, ephakathi kwehlathi kunye nolwandle lwePasifiki. Uhamba nje imizuzu eyi-2 ukuya kweyona ndawo iphambili yokusefa e-Ecuador! Ikhaya liquka igumbi lokulala elinye elinebhedi elala abantu ababini enoA/C, ishawari enkulu negumbi lokuhlambela nendawo yokutyela entle enendawo yokutyela ephandle +, ikhitshi elikumgangatho ophezulu elinamanzi acociweyo, isinki enkulu nayo yonke into oyidingayo ukuze upheke isidlo esimnandi. Phuma ngasemnyango ukuze ufumane ishawa ephandle nendawo yokugcina izinto zebhodi yokusefa. Wamkelekile kwi-ayampe!
Le ndawo inomgangatho omkhulu wendawo yokuhlala ephandle neefestile kuyo yonke indawo yendlu ukuze kungene ukukhanya kwemvelo okwaneleyo. Amagumbi anamagumbi aliqela nezinto ezicingwe kakuhle zenza abantu bazive besekhaya elikude nekhaya.
Sikwindawo yokuhlala ethe cwaka nekhuselekileyo embindini we-Ayampe! Kumgama okufutshane wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kuzo zonke iivenkile zokutyela kunye neendawo zokusefa ezikumgangatho wehlabathi, kodwa okwaneleyo awukwazi ukuva ukuphithizela kwedolophu. Buza malunga nezifundo zethu ezikhethekileyo zeCasa Nomadica kunye nezibonelelo zeklasi ye-yoga yabucala kumgangatho wakho.
Molo — singababuki zindwendwe bakho, uKelsey noEli. Sihlala kwindlu yeCasa Nomadica ngasemva kunye namantombazana ethu amabini. Sisekufutshane ngoko ukuba kukho into oyifunayo, siyakuvuyela ukunceda kwaye ungasithumelela umyalezo nanini na. Sikwafundisa nokusefa ne-yoga ukuba ungathanda ukuziquka kuhambo lwakho, sazise. Siyakuvuyela ukucebisa ngokukhenketha okufutshane okanye ngokutya. Sinethemba lokuba siza kwenza izinto onokuzonwabela e-Ayampe, ezona zigqwesileyo!
Molo — singababuki zindwendwe bakho, uKelsey noEli. Sihlala kwindlu yeCasa Nomadica ngasemva kunye namantombazana ethu amabini. Sisekufutshane ngoko ukuba kukho into oyifunayo, siy…